Development Network for Immigrants ─ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှတ်ပုံတင်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်
Updated : 2017/12/5 下午 04:08:00
လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်း (အားလုံးမူရင်းလိုသည်။) နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်မှာ
၁. နှစ်ဦးနှစ်ဖက် မှတ်ပုံတင်ကိုယ်ရေးအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်း (နိုင်ငံသားသည် မှတ်ပုံတင်။ နိုင်ငံခြားသားသည် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထား သို့မဟုတ် ပြည်ဝင်ပြည်ထွက်ခွင့်ပြုအထောက်အထား။ တရုတ်ပြည်မနိုင်ငံသားသည် ဤဝန်ကြီးဌာနလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမှ “အင်တာဗျူးပြီးကြောင်း လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှတ်ပုံတင်ရန် သက်သေအထောက်အထား” ဆိုသည့်တံဆိပ်ထုထားသော ထိုင်ဝမ်သို့ဝင်ထွက်ခွင့်ပြုအထောက်အထား)။
၂. နိုင်ငံသားအိမ်ထောင်စုဇယား၊ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်အတွင်းရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံ ၁ ပုံ (ဓာတ်ပုံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစားကို ဤဝန်ကြီးဌာန “အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးရာဝဘ်ဆိုက်” http:// www.ris.gov.tw/ သို့ စုံစမ်းရှာဖွေပါ)၊ တံဆိပ်တုံး(လက်မှတ်ရေးထိုးလို့ရ)။
၃. နိုင်ငံသားနှင့် ဤဝန်ကြီးဌာနလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမှ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ပေးထားသော အထူးနိုင်ငံမှပြည်သူများ သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံခြားသားများ ပြည်တွင်း၌မင်္ဂလာဆောင်လျှင် လက်ထပ်ထိမ်းမြားစာချုပ် (သက်သေခံ ၂ ဦး လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော သက်ဆိုင်ရာအထောက်အထားပါရှိရမည်။)၊ နိုင်ငံခြားသား တရုတ်အမည်သုံးရန်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်၊ နိုင်ငံခြားသံရုံးမှ အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ စိစစ်အတည်ပြုသောသက်သေအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းနှင့် တရုတ်ဘာသာပြန်ထားသောစာရွက်စာတမ်းများ ယူဆောင်ကာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကိုယ်တိုင် နေရာတကာရှိ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရုံးသို့သွားရောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ဌာန : တပြည်လုံးရှိ